Instagram emoticons ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 2, 2019 0 IiCententarios 1472
Amanani axelwe yi-WeAreSocial kunye neHootsuite kulo nyaka, abonise ukuba eli qonga linabasebenzisi abayi-1000 bhiliyoni ekuqaleni kuka-2019. Iimpawu zemifanekiso ze-instagramUngalibazisi, ndiza kukucacisela ukuba yintoni ekufuneka uyenzile ukuze ungaphoswa ngumsindo kwaye uphile ngamava amahle kwinethiwekhi yoluntu elungileyo.
Nje ukuba ubhalise kwaye uqalise ukwalatha abahlobo bakho, usapho, iimvumi, abantu abadumileyo, abadlali, abadlali, umda wabantu obalandelayo uya kubekwa nguwe. Ungasebenzisa inethiwekhi yakho yentlalo ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho okanye emsebenzini ekhompyuter okanye naphi na apho uya khona, kwifowuni yakho ye-Android okanye i-iPhone.
Ngokukhawuleza, iimpapasho zabalandeli bakho ziya kuqala ukuvela kwiphaneli esembindini, kulapho ke xa unokuzibonakalisa kwaye umazise loo mntu ukuba uziva njani okanye ufuna ukuthini. Kwimeko, ukuba ngabantu abadumileyo, uya kusondela kwaye uya kuziva unxibelelana ngokuthe ngqo okanye phantse ngokuthe ngqo, kufutshane, nabo bantu ucinga ukuba abanakho ukufikelela kubo.
Instragram yangoku kubomi bakho bemihla ngemihla
Ngokuqinisekileyo i-Instagram yenye yezona zixhobo zentsebenzo yeefoto Abasebenzisi beefowuni eziphathwayo abanayo le nkqubo yokusebenza.
Singatsho ukuba le webhsayithi yentlalo ine njongo yayo ephambili nomsebenzi wayo ukunika ukujonga okungcono kunye okwahlula konke kuzo zonke iifoto zakho ngoncedo lwezakheko zantlandlolo kunye nothotho lweefilitha, phakathi apho unokuthemba ezinye ezidume kakhulu njenge: XPro-II , I-Earlybird, i-Lo-fi, i-Sutro, i-Toaster, i-Brannan, i-Inkwell, i-Walden, i-Hefe, i-Nashville okanye i-1977, phakathi kwezinye ezaziwayo.
Ezona zinto zinqwenelekayo zangoku
Nangona kunjalo, imeko yentlalo ye-Instagram yinto eyenze ukuba inethiwekhi ethandwayo nenesidima, yiyo eza kukuvumela ukuba ulandele abasebenzisi abathile okhethileyo okanye abantu abadumileyo, ukubona ngamaxesha onke ukuba yintoni intshukumo yabo kolu thungelwano, iifoto zilayishe, okanye tag iifoto zakho kunye neevidiyo, zijonge "hashtags (#)" ukuze kube lula kakhulu ukufumana indlela yefoto lomzuzu kwaye ujonge imifanekiso yabanye abasebenzisi kulo lonke ixesha iplanethi
Imisebenzi eyahlukeneyo yezentlalo yokusetyenziswa kwesi sicelo ayihlali apha kwaye igqithe ngaphaya koko kubonakala ngathi kukho, kuba ukongeza ekuthatheni inxaxheba ungabelana ngokulula neefoto zakho kunye neevidiyo (esele zilungisiwe) ngokusebenzisa ezinye iinkqubo ezinje nge: tumblr, Twitter, Facebook okanye ulingane ngokulingana nokufaka umunwe kwiscreen se-Smartphone yakho okanye ucofe ikhompyuter yakho.
Le nethiwekhi yoluntu ingaphezulu kwesicelo esilula kwabanye abasebenzisi bayo, ingaphezulu nje kweqonga lokuthatha iifoto, iividiyo kunye nokufaka iifilitha ezintle, kwabo bakholelwa ukuba yindlela entsha kunye nendlela yokuzibonakalisa kunye nokunxibelelana nabanye. abantu abanomdla ofanayo. Uninzi lwabasebenzisi, kusesicelo esihle kwaye esimangalisayo ukubeka amacebo amahle kwiifoto.
Zithini ii-emoticons okanye ezincumisayo?
I-Emoji, ii-emoticons, okanye zikwabizwa ngokuba ziimvakalelo, ziimpawu ezintle ezo zibonisa imvakalelo, imo, iisimboli, izinto, okanye imimandla.
Imvelaphi yeligama livela kwigama elixubileyo ngesiNgesi: i-emoticon kunye ne icon (imvakalelo + icon), yonke imihla ithatha indawo ebomini bethu, isetyenziselwa ukubhala imiyalezo kwangoko kwaye ngamanye amaxesha ngaphandle kokubhaliweyo, ngokubeka enye okanye nangaphezulu kuzo. Kwanele ukuba uzenze uqondwe okanye uveze imvakalelo ethile, nokuba ilungile okanye ayintle kangako.
Ixesha elingaphezulu liguqukile, xa beqala ii-emoticons yayiludibaniso lwamanqaku eziphumlisi, ukusetyenziswa kwawo kwakulinganiselwe. Namhlanje sinazo engqondweni yoyilo lwantlandlolo kunye noluyolo, kwi-Instagram umzekelo, abadwelisi benkqubo bazama ukubandakanya rhoqo kunye nokuhlaziya iphalethi yobuso be-animated kwisicelo.
Ukuba unomdla kwi-emojis, Sishiya apha yonke into oyifunayo.
Yintoni onokuyenza ukunika ingxelo ngayo?
Okokuqala kufuneka wazi ukuba lonke upapasho lunokuphindaphindwa kweeyure ze24 ukusuka ngalo mhla ulayishe ngalo kwi-imeyile yakho, ke xa ubona ifoto ofuna ukuphawula ngayo, yibone ebhokisini oza kubhala kuyo kwaye umyalezo wakho ungabhalwa. okanye ungayisebenzisa emojin ukuzisa uvuyo kunye nokutsha kwinkcazo yakho.
Wena uthanda ukujonga i Instagram Amaxesha amaninzi ngosuku, ukuba uyazi zonke iindaba kunye nemiyalezo yakutshanje evela kumagcisa akho owuthandayo, iivenkile eziphambili, abahlobo bakho kunye nabantu obathandayo, kwaye ucinga ngokuphendula, uziva ngathi amagama abonakalisiweyo Ingqondo yakho kodwa ayihambi xa ufuna ukuyibhala, kuba kukho iindaba ezimnandi kuwe, kuya kufuneka uqale ngokusebenzisa i Iimpawu ezibonakalayo kwi-instagram, kwaye uya kugcwalisa ngobomi kunye novuyo kwizizwe zakho kunye nezimvo ezinomdla.
Okulandelayo, siya kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nezi ubuso ezidumileyo ziye viral.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ukuba into ebaluleke kakhulu oyinika yona kwi-intanethi kukufaka iifoto, ungazidibanisa ne-emojin eyona nto ingumvakalelo kolu nxibelelwano lubalulekileyo loluntu.
Ngaba uyazi ukuba siba ngabafundi abancinci yonke imihla kwaye siluluntu olubonakalayo? Emva koko ii-emoticons zinokukunceda ukugcina utyelelo ngakumbi kwiprofayile yakho nakupapasho lwakho kwinethiwekhi yoluntu kunye nokutsala umdla wabahlobo bakho kunye nosapho.
Ikhibhodi (i-iOS kunye ne-Android)
Ukuba ungumsebenzisi wenethiwekhi yoluntu kwaye uyisebenzisa kwiselfowuni yakho ye-Android okanye yefowuni yefowuni kwaye ufuna ukwenza amazwana abenawo ngokudlulisa Iimpawu zemifanekiso kwi-instagram, kufuneka ufake enye ikhibhodi evumela ukuba wenze njalo. Esona sicelo sithandwa kakhulu ukuba nesinye isitshixo kunye nekhibhodi eyahlukileyo, ibizwa Igama eliphambili leKika kwaye ungayikhuphela ngokudlala kweGoogle okanye ngevenkile yeTunes, kwaye ke uya kuba nayo ukusukela ngoku, Iimpawu zemifanekiso Ukwenza imiyalezo yakho ibe yeyentsusa kwaye imnandi, ikwavumela ukuba utshintshe ifonti kunye nobukhulu bayo. Ungalibali ukwenza eli nyathelo lokugqibela ukuze isebenze ikhibhodi kuqwalaselo ngokubanzi lweselfowuni yakho kwaye wenze le keyboard ibe yeyona iphambili kwaye olona khetho lwakho lulungileyo ligama eliphambili leKika.
Kukho ezinye izicelo, ezalisekisa umsebenzi ofanayo, ke ndizakuchaza amagama aliqela ukuba niwaqwalasele:
Ngale ikhibhodi kufuneka ube namava angcono kwaye igcwele i-emojin entle kwaye inempilo.
Tshintshela kumava angcono okuchwetheza kuvavanyo kunye ne-iKeyboard, le ikhibhodi ineempawu ezingcono, kubandakanya i-40 imixholo eyahlukeneyo enemibala ehlaziywa veki nganye, nokuba nenketho yemixholo yesiqhelo, ukuze ubonise italente yakho kunye nokudala, ube nokungaphezulu I-emojis ye-800, ubuso obonwabileyo, kufuneka ukhethe i-gifs, ikuvumela ukuba ubhale ngokutyibilikayo, ucebisa amagama (eli gama alumkelekileyo) kwaye wenze ulungiso oluzenzekelayo, ixhasa ngaphezu kweelwimi ze60 kunye nokuhamba ngokukhululekileyo!
Ikhibhodi yeGoogle inokukhawuleza, ukhuseleko lokuba yimveliso kaGoogle, iimvakalelo ezininzi ngokwamanqanaba, ngokubhala ngokwamkelwa kwelizwi, zonke ezi nkonzo ndizichazayo ziya kufumaneka nasiphi na isicelo (ukuthumela imiyalezo, i-Facebook, WhatsApp, umgca, phakathi abanye) oyisebenzisayo kwiselfowuni yakho.
Qaphela: Kubalulekile ukuba uqwalasele oku kulandelayo. Xa uthatha isigqibo sokufaka izicelo zomntu wesithathu, unikezela ugunyaziso lokuba ube nokufikelela kulo lonke ulwazi lwakho lomntu, indawo, idatha yebhanki oyigcinileyo kwisixhobo sakho esiphathwayo, ezisetyenziswa ngabaphuhlisi ukuphucula inguqulelo zezicelo, ulumke kwaye uphephe ukuba lixhoba Izaphuli-mthetho ezisebenzisa i-cyber ezenzelwe ukuqhatha abasebenzisi bezi zicelo.
Amaphepha egalari yemifanekiso ye-Emoticon kwi-instagram
Kukho iphepha lewebhu elingapheliyo kwi-intanethi yokwenza ukhetho lwakho ekukhangelo Iimpawu zemifanekiso ze-instagram, ezinye iibhlog kunye neWebhusayithi ezinokuqokelelwa kwemifanekiso kwilayibrari ukulungiselela le njongo, apha unokufumana i-emoticon oyithandayo kwaye ofuna ukuyisebenzisa kwaye ulungele ukwenza ikopi kunye nokuncamathisela kule nethwekhi yoluntu kunye. Uya kuba kwisiza esikhoyo. Onke amaphepha ahambelana neeWindows, iWindows kunye neesistim ezisebenzayo zeWindows.
Nanga amanye amaphepha e web, apho unokubona imifanekiso yemifanekiso ukuze usike kwaye uyincamathisele kwi-instagram yakho.
1.- Khuphela kwaye uncamathisele i-emoji
3.-Twilley (amabali abalaseleyo, zininzi i-emojis zamabali akho kule nethiwekhi yentlalo)
Buza kunye neemvakalelo ezityibilikayo
Ukusukela ngo-2018, i-Instagram yazisa ngophuculo oluninzi kunye nohlaziyo kwiqonga lwenethiwekhi yoluntu, kunye nezitikha ezitsha kunye nezangoku zokutyibilika kwee-emoticons, ungazisebenzisa nanini na ufuna, ukubuza imibuzo kusapho nakwizihlobo zakho, ungenza kube lula ukusebenzisana kwaye wenze okungakumbi oopopayi ngokudibanisa ii-emoticons kumabali athunyelweyo. Ungabuza nantoni na oyifunayo, umzekelo:
Ngaba uyathanda ukulala kakhulu ?
Ndikhuthaze ukuba ndiye kunye nam kwixa elizayo kuhambo ✈🚙🛳
Ngaba uyayithanda into yokwenza kwam 💅👍💃
Ndiqhube kakuhle kwiGym?
Kutyiwa kangakanani ukutya?
Ukongeza i-emoji etyibilikayo kumabali akho, kuya kufuneka uyikhethe ukusuka phezulu, kukho ipaneli yezitikha okanye izincamathelisi, khetha leyo iyahambelana nomzuzu, kunjalo, oku emva kokuba ukhethe okanye uthathe ividiyo kunye / okanye ifoto kufuneka ubhale umbuzo owuthandayo. Iya kuba yindlela elula yokuba abahlobo bakho bavote kwaye uyazi iziphumo ezinxulumene nombuzo wakho, ziya kufana neendawo zokuvota.
Nyanga nganye le nethiwekhi yentlalontle ibeka iinzame zayo ezilungileyo kunye nomzamo wokuqhubeka nokuphucula kunye nokwazisa ubuncinci uhlaziyo lwenguqulo yayo, ukongeza ukusebenza okutsha kwinethiwekhi yayo, ukuze uqhubeke nokonwabela iinkonzo zayo ezintsha kunye netekhnoloji yakutshanje. Imisebenzi ephuculweyo mva nje yenziwe ukuba isetyenziselwe ukubonisa, ukonwabisa kunye nokwenza ukuba amabali akho onwabe ngakumbi, nokuba matsha emojin eya ngaphaya kobuso obunopopayi.
I-Instagram ibe yimpumelelo yokubandakanya kuthungelwano lwayo lwezentlalo lweefoto izincamathelisi zeemvakalelo zesilayidi, oku kukusebenza okuvumela wena njengomsebenzisi kwaye ngaphakathi kwamabali owaphuhlisayo, ukubuza abahlobo bakho umbuzo usebenzisa ii-emoticons ezi-animation okanye i-emojis kwaye ulinde ukuba bakuphendule ngendlela efanayo.
Umzekelo, ungabuza ukuba ukuthanda kangakanani ukutya okuqhwethayo? Okanye ukuba ndibonakala ndimhle efotweni, ukuqala kumbuzo, abalandeli bakho kufuneka baphendule ngokushenxisa i-emoji ngesalathiso esisekela isixa. Lo msebenzi uyafumaneka kwigalari yezitikha kwaye ubandakanya ukukhetha ukusebenza kunye nesitikha sakho kwaye emva kokuba wenze ividiyo yakho okanye ukhetha ifoto, ungabhala umbuzo kwaye ukhethe i-emoji oyithandayo.
Zonke izitikha ezityibilikayo ziyafumaneka kuhlobo lwe-44 lwe "app" ye-Instagram yeOS kunye ne-Android. Kwanele nje ukuba uhlaziye isicelo kwi-Smartphone yakho kwaye uya kufumana ukusebenza okutsha okufumaneka kwicandelo lamabali kule nweb yentlalo.
Uyenza njani imifanekiso yakho yamabali?
Qinisekisa i-akhawunti ye-GIPHY
Ukwenza ezakho izitikha zamabali akho e-Instagram, kuya kufuneka ulayishe ii-Gifs ezininzi ngaphandle kwemvelaphi yesicelo se-Giphy kwaye unxibelelane nabo ukuze ufumane iakhawunti eqinisekisiweyo. Nje ukuba iakhawunti yakho iqinisekiswe kwaye umxholo ulayishwe, kuphela emva koko apho unokusebenzisa ii-Gifs zakho kumabali akho kule nethiwekhi yokuncokola kwaye unike iakhawunti yakho umbono okhethekileyo kunye nowobuqu.
Yintoni i-GIF okanye i-Sticker?
Xa uza kupapasha ibali kule nethiwekhi yezoluntu, iinketho ezibonakala "kwiBali le-Instagram" zibandakanya izincamathelisi. Oko kukuthi, ngokuchasene nokukhetha kokusetyenziswa kokusetyenziswa kwezitikha ezikhankanyiweyo, zemibuzo, kuphando, kwiiGifs kunye nokongeza yonke eminye ye-emojis. Kule meko, kuya kufuneka uyazi indlela yokusebenzisa izincamathelisi ze-Gifs, ukuze udale kwaye uzongeze ezakho.
1 Instragram yangoku kubomi bakho bemihla ngemihla
1.1 Ezona zinto zinqwenelekayo zangoku
2 Zithini ii-emoticons okanye ezincumisayo?
2.1 Yintoni onokuyenza ukunika ingxelo ngayo?
3 Ikhibhodi (i-iOS kunye ne-Android)
4 Amaphepha egalari yemifanekiso ye-Emoticon kwi-instagram
4.1 Buza kunye neemvakalelo ezityibilikayo
4.2 Uhlaziyo lwe-Instagram
5 Uyenza njani imifanekiso yakho yamabali?
5.1 Qinisekisa i-akhawunti ye-GIPHY
5.2 Yintoni i-GIF okanye i-Sticker?